Ụzọ Ntugharị Na-aga n'Izigharị Ntanetị - Nyochaa
New & Ọzọ Ọnụ mbepụ
Ngwongwo uzo igwe uzo: Nhazi akwukwo nso
Ngwongwo igwe uzo Toaster bu uzo ntanetua n'efu n'enye gi ohere ighota uzo gi na gburugburu ala iji meputa ugbua ma obu ije ije. Ozugbo e kere ya, ị nwere ike ịchekwaa map gị, lee ha na Google Earth (elekere anya elu 3D) ma ọ bụ bupu ha na ụdị faịlụ faịlụ GPS, gụnyere .gpx , .tcx (Training Center version 2), na .mbcrs.
Ngwa na n'efu.
Ụzọ ntụgharị na-akpaghị aka n'okporo ụzọ.
Na-ebupụ faịlụ na usoro GPS.
Interface obere quirky. Na-eme ụfọdụ omume.
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-akpaghị aka (ndepụta nke ntụziaka) chọrọ ederede dị ukwuu.
Mepụta ma zọpụta ihe ọmụmụ.
Pan na biagharị na map nke Google Maps nyere.
Mepụta ụzọ nchịkọta tinyere mgbatị elu.
Nchịkọta nchịkọta na-egosi nfe, oge e mere atụmatụ, oke nrịgo na ọdịda, amalite ịrị elu, na ndị ọzọ.
Ntuziaka Nduzi - Nzọgharị okporo ụzọ Toaster: Nkụzi Oge Na-eme Ihe
Ọ dị mfe ịnweta ụzọ data site na mma gị GPS ma lee ma chekwaa ya maka amaokwu ikpeazụ. Ma, olee maka ụzọ ị na-agatụbeghị? Ọ dị mfe ịchọpụta ma chepụta ụzọ ọhụụ ma nweta data GPS zuru ezu na stats na ha na Ịntanetị ụgbọala okporo ụzọ Toaster free ọrụ n'ịntanetị.
Uzo igwe uzo Ngwá ike nke nyocha bu ihe na-esi na ya. Nanị pịa bọtịnụ "map" ya, bubata ma gbanye map ahụ gaa ebe mbido gị, wee pịazie ụzọ gị gburugburu ụzọ. The Toaster nwere ezigbo nsonaazụ ntanetị nke na-eme ka ụzọ gị na-acha anụnụ anụnụ dị n'okporo ụzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịpị isi ihe abụọ dị kilomita abụọ, ma ọ bụrụhaala na ha nọ n'otu ụzọ ahụ, usoro na-acha uhie uhie ga-agbaso na akpaghị aka. Naanị tinye "isi ihe" na ntinye aka ma tinye ntuziaka ntụgharị.
Atụmatụ abụọ: denye aha (n'okpuru taabụ "ọmụmụ") ma banye tupu ịmalite. Ị nwere ike ịchekwa ọrụ gị naanị ma ọ bụrụ na ịdenyere aha gị. Ọzọkwa, mgbe ị gwụchara ụzọ, adịghị pịa "ọmụmụ" maọbụ ị ga-efunahụ ọrụ gị. Pịa na taabụ "nchịkọta" na aha ma chekwaa usoro gị.
Nke a bụ otu ụlọ ọrụ si kọwaa ngwaahịa ya: "BikeRouteToaster.com bụ ihe eji eme ihe na Garmin Edge / Forerunner nwe ọ bụ ezie na ndị ọrụ ndị ọzọ na-enweghị GPS nwere ike ịchọpụta na ọ bara uru maka ime njem."
Nzọgharị uzo To interface interface nwere ike ịbụ ntakịrị ihe, na-efu ọrụ m ugboro ole na ole tupu ị chọpụta ụzọ ị ga-esi chekwaa ụzọ, mana ọsọ, ịdị mfe, na atụmatụ mbupụ na-eme ka ọ dị mma.
Kedu ihe bụ nchekwa na olee otú ọ si arụ ọrụ?
Olee otú Ekekọrịta Amazon Prime
Kedu ihe bụ LCD? Definition nke LCD
7 Ntanetị Online na ngwa ọdịnala iji mụta asụsụ ogbi
GPS enyere, A-GPS, AGPS
Lyder vs. Uber: Gini bu Uzo di iche?
Ime Anwansi Anwansi - Nyocha Ngwaahịa na Otu esi eji
Uzo esi ekpo osisi
Garmin's Forerunner 225 Watch With Heart Built Rate
Otu esi achọta tumorisi isiokwu maka Free
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'agbata Google na mkpụrụ akwụkwọ?
Cyberpower PC Zeus Obere
Ihe Nlereanya 3D - Ngwaọrụ, Edges, Polygons & More
Na-ahapụ Outlook Express kọmpat ozi mgbe Ọ Na-ajụ
HP Deskjet F4280 Onye na-ebipụta ihe niile
Ihe kachasị ASUS ndị na-eme njem na Buy na 2018
ICloud Drive: Atụmatụ na Ụgwọ
Ndị na-agụ PDF maka Windows Mobile & Pocket PC
Ihe mere onye ọbụla ọbụlị kwesịrị iji budata XKit Extension
Njikọ Njikọ Ịntanetị maka Netwọk Ụlọ
Afọ 20 nke Adobe Photoshop
6 Ụzọ iji mee ka egwuregwu FPS gị
Egwuregwu egwu Freemake: Free Stream na Music Iwu
Egwuregwu ndị a na-ewu ewu maka Ụmụaka Na-amụ Akwụkwọ Elementary 5-8
Ndi na-edekọ DVD enwere mkpọchi mpaghara mpaghara?